4 qodob oo laga soo saaray kulankii Wasiirka Gudaha iyo odayaasha Hiiraan | Xaysimo
Home War 4 qodob oo laga soo saaray kulankii Wasiirka Gudaha iyo odayaasha Hiiraan
4 qodob oo laga soo saaray kulankii Wasiirka Gudaha iyo odayaasha Hiiraan
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa maanta Magaalada Beledweyne kula kulmay qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan.
1 – In Wasiirka Arrimaha Gudaha uu ballanqaadayo inaanu Madaxweynaha Hirshabelle imaan doonin Beledweyne, inta xal laga gaarayo khilaafka jira iyo tabashooyinka ay reer Hiiraan qabaan.
2 – In Dowladda Soomaaliya aanay Ciidamada Qalabka Sida u adeegsan doonin dadka reer Hiiraan ee saluugsan Dhismaha Hirshabelle-da cusub.
3 – In Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Odayaasha Dhaqanka ka dalbaday in ay dejiyaan xaaladda ka taagan Beledweyne, kana qayb qaataan sidii wadooyinka xiran loo furi lahaa.
4 – In Odayaasha Dhaqanka ay Wasiirka Arrimaha Gudaha u soo gudbiyaan warqad ay kaga hadlayaan tabashooyinkooda ku aadan Dhismaha Maamulka cusub ee Hirshabelle, si uu u gaarsiiyo Madaxweynaha Qaranka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.